Mibilaogy ny nofinofy: Vinany mankany amin’ny Fampiharana · Global Voices teny Malagasy
Mibilaogy ny nofinofy: Vinany mankany amin'ny Fampiharana
Nanomboka tamin'ny Janoary ny ampaham-potoana fanaovana fampiharana ilay tetikasa
Voadika ny 13 Jona 2019 18:16 GMT
Anatin'ny fotoana fanaovana fampiharana tsara mihitsy izao ny tetikasa “Mibilaogy ny nofinofy” an'ny Orizonturi Foundation’, ary efa nahatsangana sahady sy mitantana ny bilaoginy ireo mpandray anjara sasany.
Amin'ny alàlan'ny tetikasa “Mibilaogy ny nofinofy”, vatsian'ny famatsiambola madiniky ny Rising Voices, nisy tamin'ny taona lasa ny klioba fanoratana bilaogy natsangana ho an'ireo mpampiasa ny tolotra fitsaboana ny aretintsaina. Nofanina tamin'ny famoronana sy fitantanana bilaogy ireo mpikambana, ary tanjona farany tamin'izany ny handrafetana bilaogy iray ifandrimbonana. Ny Orizonturi Foundation, miorina ao Câmpulung Moldovenesc, Romania, dia efa ho 15 taona no nanampy ireo olona manana aretintsaina, ary manantena fa io klioba fanoratana bilaogy io dia hanampy hampihena ny fitsaratsarampoana atrehan'ireo olona manana olana amin'ny fahasalaman'ny sainy ao Romania.
Nanomboka tamin'ny ampaham-potoana fanofanana ara-teknika ilay tetikasa, izay nianaran'ireo mpandray anjara ny fanoratana bilaogy, fampiasana fakantsary nomerika, ary fanmpakarana saripika. Kanefa, nanomboka tamin'ny Janoary, dia niditra tao anatin'ny ampaham-potoana fanaovana fampiharana ilay tetikasa, ka mandritra izany ireo mpandray anjara dia ho afaka ny hamerin-desona sy hanao fampiharana izay nianaran-dry zareo hatreto. Mandritra io fotoana io, ho lasa hifankahazatra amin'ny aterineto ihany koa ireo mpikambana ao anatin'ilay klioba fanoratana bilaogy, ho afaka hiasa amin'ny bilaogin-dry zareo sy hahazo aina amin'ny fanoratana bialogy araka izay tiany.
Ny bilaogin'ny tetikasa Blogging the Dream (tamin'izany fotoana izany) dia nizara tsonga vitsivitsy avy amin'ireo bilaogin'ny mpikambana tao anatiny, ka tao ireo mpandray anjara no nangatahana mba hisaintsaina ny fiantraikan'ny firotsahan'izy ireo an-tsehatra ao anatin'ity tetikasa ity. Ohatra, Andrea, 13 taona, miteny hoe:
I Mirela, izay tolorako fisaorana betsaka, no nahafantarako momba ity fandaharanasa [Mibilaogy ny nofinofy] ity. Izy, niaraka tamin'ny Orizonturi Foundation, no nampianatra ahy ny fampiasàna solosaina. Tonga foana nanatrika tamim-pifaliana ny fampianarana aho sady nangetaheta hianatra zavatra vaovao. Nanjohy ny fandaharanasa aho satria tia manoratra ary milalao amin'ny solosaina, saingy eto aho mianatra ny miasa aminà solosaina. Ny tombontsoa azoko avy amin'ity fandaharanasa ity dia ny finamànana miaraka amin'ireo izay nianarako sy ny lesona azoko avy amin-dry zareo.
Geta, 46 taona, mpikambana iray avy amin'ilay klioba fanoratana bilaogy, mizara koa ny fomba fijeriny:
Nirotsaka tamin'ity fandaharanasa [Mibilaogy ny nofinofy] ity aho mba hianatra zavatra vaovao, ary ankehitriny dia mahavita mitety tsimoramora ny solosaina sy amin'ny fombako manokana. Ny fifandraisana amin'olona maro kokoa no tena mampisy dikany an'ity fandaharanasa ity ho ahy. Efa mahatsapa sahady ho akaiky kokoa ny olona aho hatramin'ny nanombohan'ity fandaharanasa ity. Nahaliana ahy ny lafiny fiofanana an-taratasy ary nahay zavatra vaovao aho. Hampiasa ireo fahalalàna azoko aho mba hamoronako ny bilaogiko sy hifandraisako amin'ny olona betsaka kokoa.
Ireo ny sasantsasany amin'ny bilaogin'ireo mpandray anjara mbola eo an-dalam-pandrafetana (amin'ny teny Romana):
Ary tsy ireo mpikambana ao anatin'ilay klioba fanoratana bilaogy irery ihany no mahazo tombony amin'ny fahafahana miditra aterineton'ny Orizonturi Foundation. Hazavain'ny bilaogin'ny tetikasa ny fomba ataon'ny faribolan'ny haisoratra sy ny klioba fianarana teny anglisy ao amin'ìlay fikambanana hampiasàny ny tranonkala mba hanaovana fikarohana, namorona kaonty imailaka ny sasany amin'ireo mpampiasa ny tolotra ho an'ny fahasalamana ara-tsaina, ary nahazo fampianarana totoafo momba ny aterineto nandritra ireo ora fiasana. Hoy ny famelabelaran'ny bilaogin'ny tetikasa azy:
Mavitrika ihany koa any anatin'ireny vondrona ireny ny maro amin'ireo mpandray anjara tamin'ny fanoratana bilaogy, ary feno rehareha tokoa mampiseho ny bilaogin-dry zareo amin'ireo mpikambana hafa ao anatin'ny fikambanana. Etsy andaniny, sady mamafy fitia te-hahafantatra sy fahalinana ao anatin'ny tambajotra sosalin-dry zareo mivantana. Ny azonay antenaina fotsiny dia mba hitohy hisandrahaka manerana ny vondrom-piarahamoninay manontolo izy ity.